အဆိုပါ MSI AFTERBURNER အတွက်ဂိမ်း၏စောင့်ကြည့်မှုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
MSI Afterburner အတွက်ဂိမ်းမော်နီတာတွင်ဖွင့်
မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း, MSI Afterburner သုံးပြီးကသည် Periodic စမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်သည်။ ယင်း၏ parameters တွေကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ, program ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု mode ကိုပါဝင်သည်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတတ်လျှင်, သင်အမြဲခြိုးဖောကျကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့, ကဒ်၏စစ်ဆင်ရေးညှိနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့ကပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
MSI Afterburner ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
စောင့်ကြည့်မှု tab ကို
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးနောက်, tab ကိုသွားပါ "ပြင်ဆင်မှုအား-စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း"။ လယ်ပြင်၌ "Active ဂရစ်ဖစ်ု့ကပ်ရေး"ကျနော်တို့ပြသပါလိမ့်မည်အဘယ်အရာကိုခင်းကျင်းပြသ settings ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူအချိန်စာရင်းပြတင်းပေါက်၏အောက်ဆုံးမှရွှေ့နှင့် box ထဲမှာတစ်ဦးကို tick ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု "ဟုအဆိုပါပြသမှု-screen display အတွက်ပြရန်"။ ကျနော်တို့တော်တော်များများ parameters များကိုစောင့်ကြည့်ဦးမည်ဆိုပါက, ထို့နောက်တနည်းကြွင်းသောအရာထည့်ပါ။
အထက်ပါလုပ်ရပ်များပြီးနောက်ဇယားတွေနဲ့ပြတင်းပေါက်၏ညာဘက်အပိုင်းကော်လံ "Properties ကို"ပေါ်လာဖို့အပိုဆောင်းစာလုံးကို "EDI ခုနှစ်တွင်".
settings ကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲ, အ tab ကိုဖွင့်လှစ် "EDI".
ဒီ tab ကိုသငျသညျကိုမမွငျနိုငျပါလျှင် MSI Afterburner ကို install အခါ, ဒါကြောင့်, သင်ထားတဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကို RivaTuner မတပ်ဆင်ပါနဲ့။ ဒီလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေကိုအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ installation ကိုလိုအပ်ပါသည်။ RivaTuner နှင့်ပြဿနာကနေစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲ, MSI Afterburner reinstall ။
အခုတော့ပြတင်းပေါက် display ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိမ့်မည်ဟု hotkey configure ။ ဒါကြောင့် add လိုချင်သောလယ်ပြင်၌ရှိသော cursor ထားလိုချင်သော key ကိုနှိပ်ဖို့, ကချက်ချင်းပြသနေသည်။
ထိုး "အဆင့်မြင့်"။ ဤတွင်ကျနော်တို့ရုံ RivaTuner သတ်မှတ်ရန်လိုသည်။ ကျနော်တို့စခရင်ပုံ၌ရှိသကဲ့သို့, လိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဖွင့်။
သင် font ကိုတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အရောင်ကိုသတ်မှတ်ချင်လျှင်, ထိုသေတ္တာပေါ်တွင်နှိပ်ပါ «တွင်မျက်နှာပြင် Display ကို palette ».
အတွက်ချဲ့ထို option ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် «တွင်မျက်နှာပြင်မှန်ဘီလူး».
ကျနော်တို့တောင်မှ font ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ထိုကိုသွား « rasterizer 3D ».
လုပ်မဆိုအပြောင်းအလဲများအထူး window တွင်ပြသလျက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင်ပြေဘို့ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာမောက်နှင့်အတူကဆွဲအားဖြင့်ဗဟိုမှစာသားရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် screen ပေါ်မှာပြသပါလိမ့်မည်။
အခုကျနော်တို့ရရှိပါသည်အဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။ ကြှနျတေျာ့အမှုအထဲတွင်, ဂိမ်းစတင်ခြင်း «ပြားထဲက2"မျက်နှာပြင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ settings ကိုနှင့်အညီပြသသောတင်အမှတ်ဗီဒီယို, တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: How To Overclock Your GPU - The Ultimate Easy Guide 2019 (အောက်တိုဘာလ 2019).